Cornell University - Study in USA. Waxbarashada Abroad Magazine
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Cornell
Qor at University Cornell
University Cornell waa hay'ad gaar ah oo la asaasay 1865.
Fiiga waxbaridda ee Jaamacada Cornell waa $50,000 (Aprox.).
Cornell University, oo ku yaalla Ithaca, New York, leedahay in ka badan 1,000 ururada ardayga on campus, oo kala duwan oo ka soo Red Marching Big ee Band in Society Arrimaha Caalamiga ah. ardayda-sano First wada nool on campus woqooyi, iyo jaamacadda leedahay fursado guryo upperclassmen iyo ardayda ka qalin, In kastoo dad badan oo ay doortaan in ay ku nool yihiin off campus. Cornell leeyahay nolosha ah Greek kobcaya, leh in ka badan 60 bahda iyo sorority cutubyada. Cornell leedahay in ka badan 30 Kooxaha Iyi Division NCAA waan in tartamaan Ivy League. The Big Cornell Red waxaa laga yaabaa in ugu wanaagsan ee loo yaqaan kooxda lakrooska nin ay guul ee, oo ku guuleystay sagaal koob oo isku xigta Ivy League ka 2003 si ay u 2011. Cornell ayaa sidoo kale waxa uu leeyahay barnaamij hockey xoog.
Mid kasta oo ka Cornell ee 14 kuliyadaha iyo iskuulada ayaa qirtay ardayda u gaar ah oo ay bixisaa in ay awood u gaar ah, inkastoo graduate kasta helo shahaado ka University Cornell. laba kulliyadaha ugu weyn undergraduate Cornell ee waa College of Arts oo Sciences iyo College of Beeraha iyo Life Sciences. dugsiyada graduate Its ka mid ah S.C aadka kaalinta. Johnson Graduate School of Management, College of Engineering, Law School iyo Weill Cornell Medical College. Cornell waxaa sidoo kale si fiican u yaqaan for ay College top-kaalinta of Veterinary Medicine iyo Dugsiga sare xurmayn Maamulka Hotel. Mid ka mid ah dhaqanka da'da weyn Cornell waa Maalinta Dragon, inta lagu guda jiro kaas oo masduulaagii ka dhisay by ardayda naqshadaha-sanadka ugu horeeya waa yahannadu dhex campus. Qalinjabiyeyaasha laga xusi karaa waxaa ka mid ah laga xoreeyo. Sare Maxkamadda Caddaaladda Ruth Bader Ginsburg, author E.B. White iyo Bill Nye, ah “Science Guy.”
College Beeraha iyo Life Sciences
Cornell ee kulliyadda shahaadada labaad ee ugu weyn oo kulliyadda saddexaad ee ugu weyn ee noociisa ah ee dalka Mareykanka. Waxaan si joogta ah kaalinta sida kuliyadaha ugu fiican ee beeraha iyo la xiriira cilmiga dalka. Keydi waa kulliyad heshiiska New York State.
College of Architecture, Art, iyo Qorsheynta
AAP waxay bixisaa tababarka akhriska adag iyo waayo-aragnimada studio, halka dhiiri male, abuurka farsamo, iyo fekerka muhiimka. Waxaan diyaarin qalin our ay kaalin sida muwaadiniinta aduunka ee bulsho kala duwan oo loo dhan yahay.
Cornell ee kulliyadda shahaadada ugu weyn. Shaqaalahayagu waa Mire Waqaf oo la madaxda qaranka iyo kuwa caalamiga ah ee ay ka soo jeedaan nidaamo. Qaybta ugu wanaagsan? Koorsooyinka waa u furan yahay ardayda oo dhan ee kulliyadaha iyo dugsiyada Cornell ee.
Engineering sida soo maray iyada oo waxbaridda cusub iyo cilmi-baarista, iyo sidoo kale codsiyada la taaban karo iyo habab. Waxaan idiin sii diyaariyo in uu noqdo nooca injineer kaasoo saamayn doonaa teknoolajiyada iyo bulshooyinka ka fiican.
School of Maamulka Hotel (SHA)
undergraduate Service-oriented, graduate, iyo barnaamijyo xirfad degree. Mid kasta oo loogu talagalay in lagu caawiyo Suuraynay saldhigga aqoonta caalamiga ah, waayo, wax kasta oo maamulka hoteelada.
cilmi Pioneering, horumarinta hogaaminta, iyo wacyi bulshada: kuwanu waa daraf ee Ecology Human waxbarashada iyo waayo-aragnimo. From sayniska iyo caafimaadka inay siyaasadda iyo design, waxaan diiradda on our xaaladda aadanaha iyo caqabadaha la xiriira, fursadaha, iyo dayada aan la kulmaan. Human Ecology hagaajinaysaa noloshooda by sahaminta iyo qaabaynta xiriir aadanaha si dabiici ah, bulshada, iyo deegaanno dhisay. The College of Human Ecology waa kulliyad heshiiska New York State.
School of Relations warshadaha iyo Labor (ILR)
ILR ayaa diiradda ku koobnayn oo qura xiriirka maamulka iyo shaqaalaha in ay walaac ballaadhan oo shaqo ee dunida maanta ka-maamulka khayraadka aadanaha, dhaqaalaha shaqada iyo sharciga, iyo Mag la siiyo dhaqanka urureed, naafada, iyo xalinta khilaafaadka. Hadafkeenu waa in loo diyaariyo madaxda goobta shaqada, wargeliyo shaqada iyo siyaasada shaqada, iyo in la wanaajiyo noloshooda ka shaqeeya. ILR waa kulliyad heshiiska New York State.
Kuliyada barashada Kombiyuutarka iyo Information Science
unit An maadooyinka la qaatay koox muhim ah oo ka tirsan kuliyadda soo jiido oo dhan jaamacadda. Our la'aan? Si aad u dhexgalaan Kombuyuutarada iyo sayniska macluumaadka galay arrin kasta oo waxbarashada undergraduate Cornell ee, cilmi, barnaamijyada scholarly, iyo hawlaha. Our awood iskaashi loo hubiyo in aad ku fadhiisan doona safka hore ee horumarinta sayniska computer oo ay bartaan sidii ay u codsan in ay baahida bulshada ee.
campus graduate cusub Cornell ee isku daraa aqoon farsamo oo qoto dheer la gacan-ku-aragnimo iyo dhaqanka ah ganacsi. campus waxay bixisaa hal sanno ah Master degree Cornell of Engineering sayniska computer iyo hal sano ah Johnson Master of Business Administration. Intaa waxaa dheer, Cornell Tech waxay bixisaa laba Master of Science darajo dual in teknoolajiyada warbaahinta iyo teknolojiga caafimaad Jacobs Technion-Cornell Machadka, iskaashi aan horay loo arag oo caalami ah oo u dhexeeya Cornell iyo Technion ah.
In ka badan 90 beeraha weyn ee waxbarasho graduate, madax-bannaan oo ka mid ah kuliyadaha dhaqanka iyo waaxaha. ardayda Graduate lagu dhigo oo la hadlay cilmi iyo xirfad darajo phD iyo sayidkaaga hoos hanuunka Guddiyada Gaarka ah shaqsi xubnaha macalimiinta ama la taliyaha beer.
Barnaamijka A yar oo ruux xoog, udaneeyaan ku dhagan, iyo awood loo soocay in baridda iyo qayb nolosha caqliga sharciga. Hadafkayagu waa in la horumariyo Qareenada mustaqbalka ballaadhan maskax iyo farsamo casri ah iyo hoggaamiyayaasha.
dugsiga A top-kaalinta ganacsi oo xiriir toos ah khayraadka cilmi-baarista iyo cilmiga badan ee Cornell iyo network Qalinjabiyeyaasha ballaaran. daran An, bulshada iskaashi in sii wadaan in ay soo jiitaan nololeedka musharixiinta ugu sareysa. hab A qaab-barashada in edbiyey fahamka halka dalbanayaan natiijooyinka. Arimahan isku safarka MBA ah in Sawira ardayda galay madaxda ganacsi oo yaqaana sida loo isticmaalno awooda guud ee dadka kale natiijada aan caadi ahayn.
Waxaan heegan u ah horumarinta fahamka ee xoolaha iyo caafimaadka aadanaha ee interface ee daahfurka iyo codsiga. Waxaan kobciyo iskaashi furan guud ahaan nidaamo iyo xuduudaha hay'adaha si ay samatabbixin faa'iidooyinka ugu macquulsan dhamaan bulshada. The College of Veterinary Medicine waa kulliyad heshiiska New York State.
noqoshadooda Close la Hospital New York-Presbyterian, Memorial Sloan-Kettering Cancer Center, iyo University Rockefeller aynu qayb muhiim ah oo xarunta dunida-caan ah oo daawo tacliinta iyo cilmi-baarista Biomedical.
Doha The, laanta Qatar ah Weill Cornell Medical College waa iskuulka ugu horeeyay American caafimaad abid qotomiyey dibada. Maalgeliyey dowladda Qatar ku dhex Foundation Qatar ah, ku shaqeeya by Cornell, oo waxaan ku siin labada a shahaado Cornell MD buuxa iyo barnaamij laba sano pre-caafimaad.
Weill Cornell Graduate School of Medical Science (New York City)
Toddoba barnaamijyada ka qalin PhD cilmi-oriented loogu talagalay in lagu tababaro kuwa xiiso cilmiga Biomedical iyo habka cilmiyeed ee samaynta cilmi baaritaan. Ka shaqeeya iyada oo loo marayo Weill Cornell Medical College oo Institute Sloan-Kettering ah.
School of Education Continuing iyo Summer KAL
-Wareega Year fursado waxbarasho loogu talogalay qof kasta badan: ardayda kulliyad ku qoran; ardayda dugsiga sare; macalimiinta iyo shaqaalaha xubnaha Cornell; madaxda iyo xirfadlayaasha kale; Qalinjabiyeyaasha Cornell, waalidiinta, iyo saaxiibada; dadka deegaanka. Waxaan barbaro ka dhan ah unugyada tacliinta Cornell iyo khayraadka-oo ay ku jiraan waxbarasho baaxad booqanaya culimada iyo hoggaamiyayaasha in industry, dowladda, iyo xirfadaha kale. Admission iyo diiwaangelinta waa ka madax banaan nidaamka undergraduate iyo qalin ogolaanshaha.
University Cornell waxaa la aasaasay on April 27, 1865; Gobolka New York (NYS) Senate idman jaamacadda sida hay'adda deeqda dalka ee gobolka. Senator Cesraa Cornell bixiyeen beertiisuu in Ithaca, New York sida site a iyo $500,000 oo uu maal shakhsiyeed sida hibeynta bilowga ah. Senator kale oo bare khibrad Andrew Dickson White ku heshiiyeen in ay Madaxweynaha ugu horeysay. Inta lagu guda jiro saddexda sano ee soo socota, White garaysan dhismaha labada dhismayaasha ugu horeysay oo u safray inay soo jiitaan ardayda iyo macalimiinta. Jaamacadda waxaa la caleemo saaray October 7, 1868, iyo 412 nin ayaa ku qoran maalinta ku xigta.
Cornell horumariyo sida hay'ad teknoolajiyada cusub, codsanayso ay cilmi-baarista si ay campus u gaar ah iyo sidoo kale dadaallada wacyi. Tusaale ahaan, in 1883 waxa uu ahaa mid ka mid ah xarumaha jaamacadaha ugu horeeya si ay u isticmaalaan koronto ka Dynamo biyo-shaqeeya ah Iftiin sababihii. Tan iyo markii ay 1894, Cornell ayaa ka mid ah kuliyadaha in gobolka waxa maalgelisay oo buuxiya shuruudaha sharciga; waxa uu sidoo kale maamulo hawlaha cilmi-baarista iyo kordhinta in si wadajir ah ayaa la maalgeliyey barnaamijyada ku habboon gobolka iyo federaalka
Cornell ayaa Qalinjabiyeyaasha firfircoon tan iyo fasalada ay horeeya. Waxay ahayd mid ka mid ah jaamacadaha ugu horeysay ee ka mid ah wakiilada Qalinjabiyeyaasha-doortay ay Guddiga Trustee-.
Cornell balaariyay, gaar ahaan tan iyo dagaalkii labaad ee dunida, marka ardayda badan ayaa maalgeliyey Bill GI ah. dadka Its ardayga in Ithaca qarnigii 21aad dhawaad ​​isugeynteeda 20,000 ardayda. macalimiinta ayaa sidoo kale ballaarin, iyo by 1999, jaamacadda lahaa ku saabsan 3,000 xubnaha macalimiinta. dugsiga ayaa kor u kacay tirada koorsooyinka. Maanta jaamacadda leedahay in ka badan 4,000 koorsooyinka.
Tan iyo markii ay 2000, Cornell ayaa balaadhinta barnaamijyada caalamiga ah. In 2004, jaamacadda furay Medical Weill Cornell ku College ee Qatar. Waxay leedahay iskaashiga hay'adaha ee India, Singapore, iyo Jamhuuriyadda Dadka ee China. Madaxweynihii hore ee Jeffrey S. Lehman tilmaamay jaamacadda, ay profile caalamiga ah sare, a “jaamacadda qarameed”. On March 9, 2004, University Cornell iyo Stanford dhagaxii geeska ee ugu cusub a 'Bridging Center Rift dhigay’ in la dhiso, oo si wadajir ah u shaqeeya waxbarashada oo ku taal soohdinta Israa'iil-Urdun.
Ma rabtaa wada hadlaan University Cornell ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Cornell on Map
Photos: Cornell University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Cornell
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Cornell.